बाझोपनका पाँच लक्षण ! जसले महिलालाई ‘आमा’ बन्न दिन्न
Monday,2Jul, 2018 6:12 PM
हरेक महिलाको लागि आमा बन्नु जीवनको सबैभन्दा सुखद क्षण हो । यसलाई लिएर महिलाहरुले अनेकौं सपना बुनेका हुन्छन् । तर कयौं महिलाहरु यो सुखद संयोगबाट बंचित पनि हुन पुग्छन् । महिलामा हुने फिमेल इंफर्टिलिटी ( बाँझोपन) ले उनीहरुको सबै सपना चकनाचुर पारिदिन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण जिम्मेदार छन् ।
१. महिनावारीमा परेशानी
कुनै पनि महिला त्यतिखेर गर्भवती हुन सक्छिन जतिबेला उनको महिनावारी नियमित हुने गर्छ । अनियमित महिनावारी, महिनावारीको दौरान हुने दुखाइ, या महिनावारी नै नहुनुले बाँझोपनको शिकार बनाउन सक्छ । यदि तपाईँलाई पनि यस्तै समस्या छ भने तत्काल चिकित्सकको सल्लाहा लिइहाल्नुस ।
२.गर्भाशयबाट रगत बग्नु
केही महिलाहरुमा महिनावारीको अलावा गर्भाशयबाट पनि हल्का रगत बग्ने गर्दछ । जसलाई ‘फइब्राएड्स’ भनिन्छ । यो गर्भाशयमा हुने एक प्रकारको ट्युमर हो । यदि कुनै महिला यस्तो समस्याले ग्रसित छिन भने उनमा गर्भ बस्न नसक्ने हुन्छ । गर्भ बस्यो भने पनि तुहिने खतरा हुन्छ । यसको उपचार सर्जरीद्वारा गर्न सकिन्छ ।
३. शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पीडा हुनु
शारीरिक सम्बन्ध राख्दा पीडा हुनु हुँदैन । यदि शारीरिक सम्बन्ध राख्दा तपाईंलाई पीडा हुन्छ भने तुरुन्त डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोस । किनकी यो पनि बाँझो पनको एउटा संकेत हो ।
४. अचानक वजन बढ्नु
विवाहपश्चात केही महिलाहरुमा अचानक वजन बढ्ने गर्छ । यदि कसैको वजन अनेक व्यायाम र खानपिनमा ध्यान दिँदा पनि घट्दैन भने यो बाँझोपनको कारण हुन सक्छ ।
५. अनुहारमा रौं पलाउनु
शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको लेवल बढ्दा अनुहारमा रौं पलाउन थाल्छ । यदि तपाईंको चिउँडो, ओठ, छाती र पेटमा रौं बढ्न थाल्यो भने यो टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको गडबडीको लक्षण हुन सक्छ । महिलाहरुमा टेस्टोस्टेरोनको लेवल बढ्दा बाँझोपनको खतरा पनि बढ्दै जान्छ ।